DVD live Ny Railovy : Mivoaka ny « Takariva firaisana » | NewsMada
DVD live Ny Railovy : Mivoaka ny « Takariva firaisana »
Tonga ilay nandrasana ! Tao anatin’ny 2 taona, tsy tazana teny an-tsehatra ny tarika Ny Railovy. Teo ny fahalasanan’i Rida fa tao ihany koa ny fiomanana hiatrehana ny hoavy manaraka. Anisan’ireny ny vokatra vaovao…
« Takariva firaisana », fampisehoana indroa nisesy notanterahin’ny tarika Ny Railovy, tamin’ny marsa 2015, teto an-dRenivohitra. Tontosa soa amantsara ny rakitsary (DVD Live) mirakitra ilay seho farany tao amin’ny CCEsca Antanimena tamin’io fotoana io. Hira 30 miampy fanampiny iray no mandrafitra azy ity. « Rakitsary manokana tena manan-danja eo amin’ny fiainan’ny tarika Ny Railovy, ankehitriny, izy ity, satria sady voalohany no farany », hoy i Andriamahatana Hery, mpikambana ao anatin’ny tarika. Rakitsary noraisina mivantana tamina seho an-tsehatra ho an’ny tarika Ny Railovy ny « Takariva firaisana ». Farany kosa satria io ny ahitana farany an’i Rida (nodimandry andro vitsy taorian’ny seho) izay mpanentana sy mpanetsiketsika ny tarika Ny Railovy. « Azo lazaina ho rakitsary tsiahy an’i Rida ihany koa izy ity », hoy i Biry (iray amin’ireo nanangana ny Ny Railovy hatrany am-boalohany).
Fomba iadiana amin’ny piraty : Fanontana voafetra
Hoenti-miady amin’ny hosoka na ny piraty, hanana endrika « souscription » na famandrihana mialoha (efa manomboka amin’izao fotoana izao) ny fomba hoenti-manapariaka ity vokatra vaovao ity. « Toerana maromaro ny ahafahana manao izany raha ny eto an-dRenivohitra. Ankoatra izay, azo hanaovana izay famandrihana izay ihany koa any amin’ny mpikambana ao amin’ny tarika Ny Railovy », hoy hatrany i Hery. Ireo izay nanao ny famandrihana mialoha, afaka maka ny DVD Live amin’ny fotoana hamoahana izany amin’ny fomba ofisialy eny amin’ny Jumbo Score Ankorondrano, ny 14 sy 15 ary 16 desambra ho avy izao. Hisy rahateo fanaovana rango-tsonia (séances de dédicaces) hataon’ny tarika Ny Railovy ho an’ireo tonga manjifa ity DVD Live ity eny an-toerana. Aorian’ny 16 desambra vao ho hita eny amin’ireo toerana hamarotana azy (point de vente) ity vokatra vaovao be novokarin’ny Ny Railovy manontolo ity.
Tsipi-panohizana ho an’ny amin’ny manaraka
« Ity DVD Live Ny Railovy ity no tsipi-panohizana vaovao indray hanohizana ny tantarany », hoy hatrany i Hery. Nohamafisin’i Christian (feo fahefatra ao amin’ny tarika) rahateo fa ao anatin’ny fandaminana ny tarika ankehitriny. Tafiditra ao anatin’izany ny fidirana « studio » fandraisam-peo. Ny fandrindrana ny hira nohirain’ny Ny Railovy hifanaraka amin’ny zavamaneno misy ankehitriny. Tsy natao hanova ny maha Ny Railovy ny Ny Railovy sy ny nahafantaran’ny olona azy hatramin’izay akory izany, raha ny fanazavany hatrany. Azo antenaina ihany koa ny hisian’ny fampisehoana any amin’ny taona 2018. Hanana ny endrika fankalazana ny faha-62 taon’ny tarika izy io, raha ny fandaharan’asa vinavinain’ny Ny Railovy. Ho voavaly ihany koa ny fanontaniana « Iza no hisolo an’i Rida eny an-tsehatra ? », hoy hatrany Andriamahatana Hery.
Fantatra fa maharitra adiny 2 sy 20 mn ity seho vita anaty DVD Live ity ka i Nary ao amin’ny tarika Ny Railovy no nanao ny fandrindrana ny sary sy ny feo.